Bhurawuza Rutsigiro kana Karman
Bhurawuza Rutsigiro Policy
Isu paKarman Healthcare takazvipira kugadzira software yedu zviri nyore kufambidzana. Nekuti software iyi inowanikwa kuburikidza neWorld Wide Web, zvakawanda zvezvipingamupinyi zvine chekuita nekomputa uye software yaunoshandisa kuwana izvi zvinhu zvabviswa.
Zvakangodaro, hazvigoneke kana kushanda kwatiri kuti titsigire zvakazara zvese zvinoshanda system uye browser mubatanidzwa uripo. Unogona kuwana www.karmanhealthcare.com kuburikidza nePC, Mac, kana Linux komputa kushandisa chero eanotevera mabhurawuza anotsigirwa:
Isu tinotsigira maviri maviri apfuura maBhaibheri eese eaya mabhurawuza. Pakuburitswa vhezheni itsva, isu tichatanga kutsigira ichangoburitswa vhezheni iyi ndokumira kutsigira yekare-kare yakatsigirwa vhezheni.
Tinokurudzira kushandisa iwo azvino-ekugadzira-chikamu shanduro dzeaya mabhurawuza. Kunyanya isu tinokurudzira zvakasimba kushandisa Chrome kana Firefox.
Ongorora: Hatikurudzire kushandisa kuvandudza, kuyedza, kana beta shanduro dzeaya mabhurawuza ewebhu. Vhezheni dzisina kuburitswa pachena dzinogona kusashanda nemushando weRally. Kuti uwane rumwe ruzivo nezveazvino vhezheni dzewebhu mabhurawuza uye izvo zvekuisa, ona izvi zvinongedzo: